धेरै राजनीतिक पार्टी आवश्यक नरहेको भन्दै काँग्रेसलाई बिचार मिल्ने पार्टीसंग मिल्न पौडेलको सुझाव ! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ २०, आईतवार २०:०९	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७५ जेठ २० । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एबं प्रतिनिधीसभाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले कम्युनिष्ट पार्टीले तानाशाह निम्त्याउन खोजे भन्नु अत्यन्त गलत भएको दाबी गरेका छन् । प्रेस सेन्टर र प्रेसचौतारी बागलुङले संयुक्त रुपमा आईतबार बागलुङमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले जीवनभर निरंकुशता बिरुद्ध लडेका कम्युनिष्टहरुले तानाशाहको परिकल्पना गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
यस अगाडी कांग्रेसले शासन सत्ता सम्हालेको थियो, कम्युनिष्ट नेता पौडेलले भने आफु शासन सत्तामा रहदा लोकतन्त्र र अरु आउदा तानाशाह भन्नु गलत प्रवृत्ति हो । उनले दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सरकारले तानाशाह निम्त्याउन खोजेको होकी भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिदै संबिधान संशोधन र अदालती जटिलता फुकाउनका लागि दुई तिहाईको कसरत गरेको स्पष्ट पारे । पौडेलले संघिय समाजबादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन चाहेको खुलासा पनि गरे ।
नेता पौडेलले विचार, राजनीति र विशेषता मिल्ने अन्य कम्युनिष्ट घटकहरुबीच पनि एकता गरिने बताए । धेरै राजनीतिक दल आवश्यक नभएको भन्दै उनले नेपाली काँग्रेसलाई पनि विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता गर्न सुझाव दिए । ‘हामी कम्युनिष्टहरु समेट्दै जान्छौं, न काँग्रेसले पनि नजिकका दलहलाई एकतामा ल्याओस्’ उनले सल्लाह दिए ।.
कार्यक्रम प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष राम थापा अबिरलको अध्यक्षता र प्रेस चौतारीका सचिव सिर्जना पन्तको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
भिडियो-खगेन्द्र विश्वकर्मा, बागलुङ ।
साताको तस्वीर : कहिले भरिन्छ घम्चिनबासीको रित्तो गाग्री ?